बैंकिङ क्षेत्रका लागि खुसीको खबर ! टुरिजम डेभलोपमेन्ट बैंकका सीएफओ चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संघमा निर्वाचित !
ARCHIVE, BANKING, OFF THE BEAT » बैंकिङ क्षेत्रका लागि खुसीको खबर ! टुरिजम डेभलोपमेन्ट बैंकका सीएफओ चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संघमा निर्वाचित !
काठमाडौँ - नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संघ (एक्यान)ले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका सिएहरुलाई खास वास्ता गरेन भनेर गुनासो गर्ने बैंकरहरुलाई खुसीको खबर छ । एक्यानको निर्वाचनमा कार्यकारी समितिको सदस्यमा ६ जना निर्वाचित सदस्यहरुमध्ये टुरिजम डेभलोपमेन्ट बैंकमा सीएफओ भएर काम गरिरहेका सन्दीप बाबु पौडेल एक्यानमा निर्वाचित भएका छन् । यसो त उनीसंगै रुद्र नाथ पोख्रेलपनि बैंकर नै हुन् ।
यस्तै उनीसँगै सुवास पौडेल, संगीता कँडेरिया, ऋषि पौडेल, अमृत गिरी र रुद्रनाथ पोख्रेलले जीत हाँसील गरेका छन् । कंडेरिया शिखर सुजकि निर्देशक हुन् भने सन्दीपबाबु पौडेल टुरिजम डेभलोपमेन्ट बैंकका सीएफओ हुन् । यस्तै ऋषि पौडेल सिटि मनी एक्सप्रेसमा सीएफओ छन् भने अमृत गिरी र सुवास पौडेल 'प्राक्टिस'मा छन् ।
यता अध्यक्षमा आनन्द शर्मा वाग्ले निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षका प्रत्यासी बद्री कुमार गुरागाईंलाई हराउँदै वाग्ले अध्यक्ष पदमा बिजयी भएका हुन् । उनी यसअघि एक्यानको उपाध्यक्ष थिए भने त्यसअघि उनी कोषाध्यक्षको भूमिकामा एक्यानमा थिए ।
यस्तै कोषाध्यक्षमा राजु ढकाल बिजयी भएका छन् । आफ्ना प्रतिष्पर्धीहरु कमल सिलवाल र नवराज लामिछाने लाई पछी पार्दै ढकाल कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् । निकै प्रतिष्पर्धाको अनुमान गरिएको महासचिव पदमा अरुण राउतले विजय हाँसील गरेका छन् । उनी नेपाल बोर्डबाट उतीर्ण सिए हुन् । आफ्ना प्रतिष्पर्धी दुर्गा प्रसाद ज्ञवालीलाई हराउँदै उनी महासचिव पदमा निर्वाचित भएका हुन् ।उपाध्यक्ष पद निर्विरोध बनेको छ । सिए दीपक पाण्डे एक्यानको उपाध्यक्ष पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । आफ्नो उम्मेद्वारी दर्ता गराउने अन्तिम समयमा पनि कसैले उम्मेद्वारी नदिएपछी पाण्डे निर्विरोध भएका हुन् ।
निर्वाचित सबैले आफ्नो पद तथा गोपनियताको सपथ खाइसकेका छन् । निर्वाचित उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरिसकिएको छ । सबैलाई सफल कार्यकालको हाम्रो पनि शुभकामना !